स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ ? झिटीगुन्टा आदेशमा भएको तीन परिर्वतन जान्नुस् | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← ढाका घटना : बन्धक बनाइएका २० जनाको हत्या
नुवाकोटमा इलाका प्रशाशन कार्यालयको उद्घघाटन डा.महतले गर्ने →
१८ असार, काठमाडौं । असार सकिएलगत्तै विदेशबाट नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने सरकारले परिवर्तन गरेको झिटीगुन्टा आदेश’bout थाहा पाइराख्नुस् । सरकारले अब विदेशबाट फर्किँदा ल्याउन पाइने केही वस्तुहरुलाई प्रतिवन्धित पनि गरेको छ । सरकारले झिटीगुन्टामार्फत सुन, मदिरा र समदर भन्सार लगायतका व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । झिटीगुण्टा आदेशमा संशोधन गरेर साउन १ गतेदेखि नयाँ व्यवस्था लागू गरिँदैछ ।
औषधि उपचारका लागि विदेश गएका नागरिकले आˆनै प्रयोजनका लागि ल्याउने औषधि र शारीरिक रुपमा अशक्तहरुको सहाराको लागि ल्याइने समाग्रीमा पनि भन्सार छुटको व्यवस्था कायमै छ ।(अन्लाईनखबर )